Nagu saabsan - Hebei Zebung Rubber Technology Co., ltd.
Hebei Zebung Rubber Technology Co., Ltd waxaa la aasaasay 2003 waxayna ku taal aagga horumarinta ee degmada Jing, Gobolka Hebei, Shiinaha.
ZEBUNG waxay soo dhoofisay 4 nooc oo ah khadka wax soo saarka tuubada dareeraha ee warshadaha talyaaniga VP, waxay kordhisay khadka wax soo saarka tuubada saliida badda ee tuubada-dhexroor weyn.
ZEBUNG waxay ku dartay laba nooc oo khadadka wax soo saarka tuubada dareeraha ah, iyo in ka badan 20 nooc oo ah qalabka tijaabada iyo kormeerka.
ZEBUNG waxay la shaqeysay Machadka Teknolojiyada Badweynta ee Jaamacadda Shiinaha ee Batroolka. Isla sanadkaas, sida ku xusan shuruudaha adag ee Golaha Gobolka ee ku saabsan ilaalinta deegaanka, dhismaha cusub ee xarunta isku dhafka ah ayaa lagu soo daray.
Zebung waa la ansixiyay shahaadada OCIMF-GMPHOM 2009 oo ay xaqiijisay BV.
In ka badan 17 sano ka dib horumar deg deg ah, ZEBUNG waxay u shaqeysaa sidii shirkad hoggaamiye teknolojiyad ah. Caasimadda ZEBUNG ee diiwaangashan waxay u kacaysaa 59 milyan, shaqaale ka badan 150 shaqaale, 10 shaqaale cilmi baaris cilmiyeed, 3 injineero sare, in ka badan 120 nooc oo qalabka wax soo saarka ah.
Waxyaalaha ugu waaweyn ee ZEBUNG waa: saliida badda-weyn ee saliidda badda (saliidda badda gujis / sabayn, saliid-sabayn biyo / tubbada saliidda dock / tuubada STS); tuubbo qoto dheer oo dredging ah (qulqulka qulqulka / tuubada gaarsiinta Gaaban ee Gaaban); tubbada caagga ah ee warshadaha - FDA cuntada tuubada / UHMWPE tuubada caaga ah ee kiimikada / tuubada saliida haydarka / tuubada gawaadhida taangiga / tubbo sandblasting / tubbada la taaban karo / tuubada uumiga / tuubada saliida shidaalka iyo wixii la mid ah. Dhammaan alaabooyinka waxay heleen BV ISO9001: 2015 shahaadada nidaamka tayada caalamiga ah. Waqtigan xaadirka ah ZEBUNG waxay ku ansixiyeen shahaadada BV - OCIMF istaandarka GMPHOM 2009 ee tuubada badda iyo shahaadada FDA.
"Boutique" waa heerka shaqo ee ZEBUNG, "Integrity" waa aasaaska aasaasiga ee ZEBUNG, "heerka koowaad" waa himilada ZEBUNG, ZEBUNG had iyo jeer waxay u hogaansantaa "ku tiirsanaanta tikniyoolajiyadda casriga ah iyo hibada si loo abuuro shirkado iyadoo la adeegsanayo maamul iyo adeeg heer sare ah" Waxaan isku dayeynaa sida ugu wanaagsan kor u qaadida horumarka warshadaha tuubada iyo ka qayb qaadashada xooggeenna oo dhan.